Isisombululo esijikelezayo seOalalice Oral Solution (iMaxingshigan yolwelo ngomlomo) Izingoma: i-Ephedra, ii-almonds zeBitter, iGypsum, iLicorice. Izimpawu: Ukususa ubushushu bemiphunga, ukuphelisa i-phlegm kunye nokunciphisa isifuba somoya, kwaye ikakhulu kusetyenziswa ubushushu bangaphakathi, ukukhwehlela kunye nesifuba somoya esibangelwa ngumoya ongaphandle. Isetyenziselwa ukuthintela kunye nokunyanga isifo sokuphefumla esibangelwa kukuosuleleka yintsholongwane, umz. Usulelo lomngundo, usuleleko laryngotracheitis kunye nefuru lomkhuhlane njl njl.
I-Astragalus polysaccharoses In sindion
I-Astragalus Polysaccharide Inacterion Character: Ulwelo olunombala otyheli, iintsalela zinokuveliswa ngokugcinwa ixesha elide okanye emva kokukrola. Ukuqulunqwa: Isalathiso se-Astragalus Polysaccharide Izalathiso: Le mveliso inokuphembelela umzimba ukuba uvelise i-interferon, ilawule ukungcola komzimba, kunye nokukhuthaza ukwakheka kwee-antibodies, isetyenziselwa izifo zentsholongwane zenkukhu ezifana nesifo esosulela isifo. Ukusetyenziswa kunye nomthamo: Kwintsholongwane okanye kwimithambo engaphantsi kolusu. Idosi enye, i-2ml nge-kg nganye yomzimba ...